တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မရေးချင်သော စာ …
ဤစာစုအတွက် ကြိုတင် တောင်းပန်ချက် …
ဒီလိုစာမျိုး ကျမ မရေးချင်ပါဘူး။ မရေးချင်ဆုံး စာပါပဲ။ ရေးလိုက်ပြန်ရင် မေဓာဝီ တို့ ဖွပြန်ပြီ၊ ပြဿနာကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် အင်တာနက်ထဲ မီးထွန်းပြီး လိုက်ရှာတယ်လို့ ပြောခံရမှာ ကြောက်ပါတယ်။ တကယ်ကို ကျမ ကြောက်နေမိ တာပါ။ ဒါဆို ဘာလို့ ရေးသေးလဲ၊ အသာလေး ငြိမ်နေပါတော့လား၊ အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ … အားအားယားယားလို့ ပြောဆိုပြစ်တင်ကြရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျမကိုဝိုင်းပြီး အပြစ်တင်ကြမှာထက် မှားနေတာကြီးကို ကြည့်ရတာက ပိုပြီး နေမထိ ထိုင်မထိ ဖြစ်လွန်းတာကြောင့် ဒီစာကို ကျမ ရေးလိုက်မိတာပါပဲ။
စာဖတ်သူ စာရေးသူအပေါင်းနဲ့တကွ ကာယကံရှင်များကို ကျမ စော်ကားလိုစိတ် စိုးစဉ်းမျှ မရှိပါဘူး။ ကျမရဲ့ ရေးသားချက်ဟာ စော်ကားသလို … အဆိပ်ခတ် သလို … ဖန်တီးသူများ လက်တွန့်အောင် လက်ရွံ့အောင် လုပ်သလို ဖြစ်ခဲ့ရင် အရေးမတတ်တဲ့ ကျမအပြစ်သာ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ ကျမရဲ့ စိတ်ရင်းကတော့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေချင် … သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတခုထဲပါ။
ကဲ … အားလုံးကို ကြိုတင် တောင်းပန်ပြီး သကာလ .. ကျမ ရေးပါပြီ။
ဒီကနေ့ ကျမမိတ်ဆွေတယောက် ပို့လိုက်တဲ့ မေးလ်ထဲမှာ ဧပြီလထုတ် မိုးမခ စာစောင် အတက်ခ်ျဖိုင်နဲ့ ပါလာပါတယ်။ သူကတော့ အဲဒီထဲမယ် ကျမနာမည် တလုံးတလေတွေ့လို့ ပို့ပေးလိုက်တာပါပဲ။ တချို့ဆောင်းပါးတွေတော့ ကျမလည်း မိုးမခ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာကတည်းက ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သူပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး မဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေ ရှိနေသေးတာနဲ့ ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တနေရာအရောက် (အတိအကျ ပြောရရင်) စာမျက်နှာ ၄-က စာကိုး စကားကိုး ကဏ္ဍမှာ “သံလွင်အိပ်မက်” ဘန်နာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဘန်နာကို တွေ့တာ မဆန်းပေမဲ့ … ကျမမျက်စိထဲ တမျိုးဖြစ်သွားတာနဲ့ နောက်တကြိမ် ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ကိုယ့်မျက်စိကိုယ် မသေချာလို့ view ကို 200% အထိချဲ့ပြီး သေသေချာချာ ထပ်ကြည့်မိပြန်ပါတယ်။
(ပုံကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်စေဖို့ သံလွင်အိပ်မက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် မှ ပြန်ယူထားပါတယ်)
၁၂ လ ရာသီမိုး ကဗျာရဲ့ အစပိုဒ်ဖြစ်တဲ့
“တန်ခူးမည်မှတ်၊ ဖက်ဆွတ်ရေတိုး၊ သင်္ကြန်မိုး” … ဆိုတာကို
“တန်ခူးမည်မွတ်၊ ဖက်ဆွတ်ရေတိုး၊ သင်္ကြန်မိုး” လို့ “မှတ်” နဲ့ “မွတ်” ကို မှားယွင်း သုံးစွဲထားတာကို သတိထားမိမလားတော့ မသိဘူး။ ကျမက အဲဒီ စာလုံးကို အမြဲတမ်း သတိထားမိနေကျမို့ မိုးမခစာစောင်ထဲ ဖြတ်ခနဲ အတွေ့မှာ မှားတာကို ရုတ်တရက် မြင်သွားမိတာပါ။
ဒီကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခဏခဏ မှားလေ့ရှိကြတာကို ကျမ မြင်ခဲ့ တွေ့ခဲ့ ကြုံခဲ့ ရဖူးပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ … ၁၉၈၀ လွန် ကာလပိုင်းက ပြသခဲ့တဲ့ “သင်္ကြန်မိုး” ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာပါ။
အဲဒီအရွယ် ငယ်ငယ်ကတည်းက တီဗီမှာပြတဲ့ သင်္ကြန်မိုးကို ခံစားချက် အပြည့်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရင်း နောက်ဆုံးခန်းမှာ တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွါသွားတဲ့ သင်္ကြန်အလှပြ ကားကြီးရဲ့ နောက်မှာ ဒီကဗျာကို ပန်းချီလက်ရေးလှလှလေးနဲ့ ခုလိုပဲ မှားယွင်း ရေးထားတာ တွေ့လိုက်ရတော့ ဇာတ်ကားတကားလုံး အထင်တကြီး ကြည့်လာ ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေ ဟုတ်ခနဲပြုတ်ကျသွားသလို မအီမလည်ကြီး ခံစားခဲ့ရဖူး ပါတယ်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း သင်္ကြန်မိုးကို ခဏခဏ ပြန်ပြီး ထုတ်လွှင့်တိုင်း နောက်ဆုံးခန်းကို ကြည့်ရမှာ ရှက်သလိုလို မျက်နှာပူ သလိုလို မဆီမဆိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို မှားယွင်းနေအကြောင်းကို ပလန်းနက်ဖိုရမ် မှာတုန်းက သင်္ကြန်မိုး တော့ပစ် အောက်မှာ (ထင်ပါတယ်) ကျမ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီမှားယွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ဦးကြီး ဒါလေးတောင် မသိရကောင်းလားရယ်လို့ စိတ်ထဲ အပြစ်တင်စိတ် တ၀က်တပျက် စွက်ကာ တွေးခဲ့မိတယ်။ ပလန်းနက်ဖိုရမ်မှာ ကျမရေးတော့ တစုံတယောက်က ပြောပြပါတယ်။ ဒါရိုက်တာလည်း အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားပြီး မသိလိုက်တာ … ဇာတ်ကားပြီးမှ သိတော့ ပြန်ရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေ တာနဲ့ အဲဒီမှားယွင်းမှု အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျမလည်း မသိပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအမှားကြီးကို ကျမအနေနဲ့ ဘ၀င်မကျနိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည် ဂုဏ်ဆောင် ဇာတ်ကားတကားမှာ ခုလိုမှားတာမို့ ပိုလို့ ကြည့်ရဆိုးလှတယ်လို့ စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေခဲ့မိတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၀၆၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆-ရက် က ကျမရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ-အသံ-ကာရန်-သတ်ပုံ ဆိုတဲ့ စာမှာ ဒီအကြောင်း (ကဗျာ ကာရန် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ) ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ [ဘာကြောင့် မှတ်နဲ့ ဆွတ် ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာ အဲဒီပို့စ်မှာ အနည်းအကျဉ်း ဖော်ပြပြီးသားမို့ အခုဒီနေရာမှာ အထွေအထူး မရေး တော့ပါဘူး။]
နောက်တခါ … ကိုချမ်းမြစိုးရဲ့ဘလော့ က ဘန်နာမှာပါ။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က သင်္ကြန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာ ထင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို ဘန်နာမှာ ခုလိုပဲ မွတ်လို့ မှားယွင်း ရေးသားထားတာမို့ “သူ့ရဲ့ပို့စ်တခုက” ကွန်မန့်ထဲမှာ ကျမ ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်၊ သူကလည်း လက်ခံပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ (နားလည်စွာ လက်ခံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုချမ်းမြစိုး)
အခု တတိယအကြိမ်မြောက်ကတော့ သံလွင်အိပ်မက်ပေါ့။ သံလွင်အိပ်မက်ကို မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ကျမရဲ့ ဘလော့ ၂ ခုနဲ့ ရှုပ်နေတာကတကြောင်း၊ အခြား မြန်မာဘလော့တွေဘက် ခြေဦးလှည့်နေတာက တကြောင်း၊ အပြင်ကိစ္စ ဗာဟီရ နဲ့ မအားလပ်တာက တကြောင်းမို့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် မိုးမခမှာပါလာမှ ဒီအမှားကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ စောစောကသိရင် စောစော စီးစီး သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို (အမုန်းခံပြီး) ပြောဖြစ်ဦးမှာပါပဲ။
ဒီစာကို ရေးနေရင်းနဲ့ ဒီလိုမှားယွင်းရခြင်းရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ကျမစဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒါဟာ သင်္ကြန်မိုး ဇာတ်ကားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပဲ … လို့ ကျမစိတ်ထဲ ထင်မိပါ တယ်။ ကျမအထင် မှားကောင်းလည်း မှားပါလိမ့်မယ်။ သင်္ကြန်မိုးဆိုတာ ကျမ တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတော့ ဒီခေတ်လူအချို့ဟာ “တန်ခူးမည်မွတ်” လို့ ရေးတာကိုပဲ အမှန်ထင်ပြီး အမှတ်မှားသွားကြဟန် တူပါ တယ်။ တကယ်တမ်း ကဗျာရဲ့ မူရင်းကို သေသေချာချာ သိရင် … ဒါမှမဟုတ် … ကဗျာရဲ့ ကာရန်ယူနည်းစနစ်ကို သေသေချာချာ သိရင် … ဒီလိုတွေ မမှားတန် ကောင်းဘူးလို့ ကျမတွေးမိတယ်။ ဒါကြောင့် ကဗျာမူရင်းကို ကျမ လိုက်ရှာပြီး … ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သေချာအောင် စာအုပ်ကိုပါ စကန်ဖတ်ပြီး ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ရှုပါ။
(၁) တန်ခူးမည်မှတ်၊ ဖက်ဆွတ်ရေတိုး၊ သင်္ကြန်မိုး။
(၂) ကဆုန်အတွင်း၊ မြေသင်းပျံ့ပျံ့၊ မိုးနှံ့နှံ့။
(၃) နယုန်မိုးသေး၊ မြက်သားမွေး။
(၄) ၀ါဆိုလပြောင်း၊ မိကျောင်းဖွေးဖွေး၊ မိုးဧဧ။
(၅) ၀ါခေါင်တကြောင်း၊ ထနောင်းကျောင်ကျစ်၊ ဆူးရစ်ပွင့်ကာ၊ မိုးမရွာ၊
(၆)တော်သလင်းတိမ်ညို၊ စဖိုသည်ဆင်းရဲ၊ မိုးမစဲ။
(၇) သီတင်းကျွတ်တွင်၊ ပလ္လင်ဆေးမိုး၊ ရွာသွန်းဖြိုး။
(၈) တန်ဆောင်မုန်းတွင်း၊ ဆီးနှင်းတပြိုက်၊ မိုးတလိုက်။
(၉) နတ်တော်ရောက်ငြား၊ မိုးသားမငြိမ်၊ ဆင်ရာတိမ်။
(၁၀)ပြာသိုချမ်းပြင်း၊ ဆီးနှင်းရောယှက်၊ နှံးပုံဖျက်။
(၁၁) တပို့တွဲ၊ နွဲ၍ရွာခြင်း၊ သံမိုးကြွင်း။
(၁၂) တပေါင်းလည်းကူး၊ မိုးသားကြူး။
……………………(မှတ်ချက်။..။ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်)
မှတ်ကို မွတ်ရေးတော့ ဘာဖြစ်တုန်း၊ ခင်ဗျားက ပညာရှိကြီးလား … ဘယ်လောက်သိလို့လဲ …. ဟိုစာအုပ်ဖတ်ပါလား .. ဒီစာအုပ်ဖတ်ပါလား … စသဖြင့် ကျမကို “ပြောဆို,ဝေဖန်, တိုက်ခိုက်, ဆဲရေး” သမျှ … ခံမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတတ်ကြီး လုပ်တယ်လို့တော့ ကျမကို အထင်တော် မလွဲကြစေလိုပါ။ ပညာရပ်တွေ အများကြီးကိုလည်း ကျမ မသိပါ။ ကျမသိသလောက် တခုတလေကို မျှဝေ ညှိနှိုင်းပေးရုံ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားရင်း မရေးချင်ဘဲ ရေးလိုက်တဲ့ စာကို ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
၆၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ညနေ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ်
(၀န်ခံချက် ။ .. ။ ၁၂-ရာသီမိုး ကဗျာကို မုံရွေးဆရာတော်မှတ်စု မှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မေဓာဝီ at 1:36 AM
Thanks for sharing knowledge ,Ma May.
6/07/2007 1:54 AM
အဲ ဘယ်နဲ့ကြိုကန်ထားတာလဲ
ဒါပေမဲ့ဒီ ပို့စ် တခုထဲမှာကြိုစိုးရိမ်တာ က ရေတောင်ရဘူး
သူများပြောမပြောတာ က နောက်လေ
ကိုယ့်အငုံ့စိတ် ကိုယ် မြင်အောင်ကြည့် 
6/07/2007 2:06 AM
အင်းးးး ဘာမှ ၀င်ပြောဝူးနော်..
6/07/2007 2:56 AM
6/07/2007 3:40 AM
မမေဓာဝီ အခုလို မျှဝေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း အမှားကနေ အမှန်ဖြစ်သွားတာပါ ... နောင်မှာလည်း ကျွန်တော်မှားနေတာတွေ ရှိရင်လည်း ထောက်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ၁၂ လရာသီမိုး အတွက်လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :)
ဒီအမှားကိုတော့ မမေပြောမှ သတိထားမိတယ်။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက "တန်ခူးမည်မှတ်" လို့ပဲ သိခဲ့တယ်၊ အားလုံးကလည်း "မှတ်" ကြတယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်၊ အခုမှ သင်္ကြန်မိုး ရုပ်ရှင် အပါအ၀င် တော်တော်များများက "မွတ်" ကြကြောင်း သိရတယ်။ :D ကျွန်တော် မျက်စိမှုန်လို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ မမေပြတဲ့ သံလွင်အိပ်မက် ခေါင်းစီးပုံကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်တုန်းကတော့ "မှတ်" ထားတယ်လို့ ထင်မိခဲ့ပါတယ်။ မမေ မြင်လည်း မြင်တတ်တယ်၊ လေးစားပါတယ်။
Thank ma may for your knowledge on this great topic.
6/07/2007 5:59 PM
Ma May, everyone has the right to review what they think is correct. I dont see anything that you should be apologizing to the reader. This is your own blog,and we the writer has the right to post our article, and based on the true fact that you are providing the knowledge, i dont see anything that you should be apologizing.
ဒီစာကို ဖတ်အပြီးမှာ ဘာကိုတွေးမိလဲ ဆိုတော့ မမေမှတ်ချက်ရေး ထောက်ပြခြင်းခံရတဲ့လူ နေရာကနေ စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားတော့ ပုံစံနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် ဘယ်လို နေမလဲပေါ့။
(၁) သြော်၊ ဟုတ်ပေသားပဲ၊ အခုမှပဲ ဗဟုသုတလဲရပြီးနေပါလားဆိုတာလဲ သိရတယ်။ ကျေးဇူးပါမမေ။
(၂) ဟာ..၊ ဒီမေဓာဝီဆိုတဲ့ တယောက်ကတော့ လုပ်ပြန်ပြီ။ အားအားရှိ သူများမှားတာတွေပဲ လိုက်ထောက်နေတော့တာပဲကိုး။ `မှတ်´နဲ့ `မွတ်´.. ကဲ..မှားတယ်ကွာ.၊ ဘာဖြစ်သေးတုန်း။ အလကား အလုပ်မဟုတ်တာကို အလုပ်လိုက်လုပ်နေတယ်။ ဒီလောက် ပိစိလေးက အစ လိုက်ပြောနေတော့တာပဲ။
ပထမတခုကတော့ အတော်အေးချမ်းပါတယ်။ ကိုချမ်းမြစိုး၊ ကိုပု နဲ့ မင်းမင်း ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ရတာ အတော်လေးကို ကြည်နူးမိတယ်။ ဘလော့ဂါအချင်းချင်း အခုလို နားလည်မှု ရတော့ စာတွေက ပိုကောင်းလာတော့မယ်။ ဒီလိုပဲ တယောက်မသိတာ တယောက် အပြုသဘောနဲ့ အပြန်အလှန် ဝေမျှကြရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်လေမလဲ။ အဲဒီအတိုင်း တွေးမိတယ်။
ဒုတိယ တခုကတော့ ပူလောင်ပါတယ်။ ပူလောင်ရုံမက `ဒီငနဲမကြီးကိုတော့ မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပုံစံပေးမှ´ `ဒါ၊ သက်သက်ကျောတာ၊ နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ၊ သူလဲ မှားတဲ့အခါ ရှိဦးမှာပါ၊ အဲဒီအခါကျမှ သေဖို့သာပြင်ထား´ စသဖြင့် စသဖြင့် အတွေးတွေနဲ့အတူ မမေကို ပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်တီးဖို့ ပြင်ဆင်ပါမယ်။ လိုအပ်လာရင် ဆဲချင်လဲ ဆဲပါမယ်။ (ဒါမှ ဒင်းမှတ်မှာ၊ လာမကျောရဲမှာ၊ နောက်ကို လာမထောက်ပြရဲမှာ)။ ကဲ.. ဘယ်လောက်များ ဆိုးဝါးလိုက်ပါလေမလဲ။ ဟူး… အငှားစဉ်းစားတာနဲ့တင် တော်တော်ကို ပူလောင်လွန်းလှတယ်။
အဲဒါပါပဲဗျာ။ စဉ်းစားကြည့်မိပုံလေး ရေးမိတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျနော် ဗဟုသုတတွေ တိုးခဲ့တာတော့ အသေအချာပဲ။ မသိသေးတာတွေ သိရတယ်။ သိပြီးသားတွေလဲ ထပ်ဆင့်ပြည့်စုံသွားတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ် မမေ။
6/07/2007 11:15 PM
ဗဟုသုတ အလို့ငှာ သိလိုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
(၁၀)ပြာသိုချမ်းပြင်း၊ ဆီးနှင်းရောယှက်၊ နှံးပုံဖျက်။ ထဲမှာ နှံး ကို အရင် သိထားတာ က နှမ်း လို့ သိထားတာ...
ရုတ်တရက် နှံး ကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရ မှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ် နောက် သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့မှ သူကရှင်းပြတာ
လှံ - လှန် ၊ နှံ - နှန် (နှံး - နှန်း) အင်းဟုတ်သားပဲ..
လှံ - နာမ် ၊ လှန် - ကြိယာ ။ အဲဒီလိုပြောလို့ရလား..(လှံကြည့် - လှန်ကြည့်)
အသံထွက်ပုံလေးတွေနဲ့ ကွဲပြားပုံလေးတွေ.. ရှင်းပေးပါဦး (လူပိန်းနားလည်အောင်)
6/08/2007 3:14 AM
Every one has the right to talk freely based on what the actual fact is.
No one is perfect, every one does mistakes.
It is the duty for those who knows the topic thoroughly to tell or disclose if something is not right so that we are able to learn form each other.
That is call sharing...
မမေဓာဝီ အမှားပြင်ပေးထောက်ပြပေးတဲ့ အတွက် အမှန်ကိုသိသွားရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ၊ မမေပြောပြမှ တော်တော်အဓိပယ် လွဲတာပဲနော်၊ နောက်လဲဒီလိုအမှားပြင်ဆင်ချက်လေးတွေ တွေ့ရင်လဲမျှဝေပေးပါအုံး၊ ကိုယ်မှန်နေရင်ဘယ်သူကိုမှဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး၊ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားလိမ့်မယ်၊ လေပြေတို့အမေပြောသလို “ကြီးကတော့ အမြင်မတော်ရင်ပြောမှာပဲ လိုက်နာတာမလိုက်နာတာက လူငယ်တွေအလုပ်” တဲ့ မမေရဲ့ခံယူချက်အတိုင်း ရဲရဲသာ ဆက်လုပ်ပါ၊ လေပြေတို့ အားပေးနေပါတယ်၊
6/08/2007 4:21 AM